VaTsvangirai Vanodoma Dare Ravo reMakurukota
Gunyana 18, 2013
HARARE — Mutungamiriri weMDC-T, VaMorgan Tsvangirai, vadoma neChitatu nhengo dzebato ravo makumi maviri neimwe idzo dzichange dziri mudare ravo remakurukota, kana kuti shadow cabinet.
VaTsvangirai vanoti nhengo dzedare ravo remakurukota dzichange dzichiona kuti makurukota ehurumende yaVaMugabe aita basa nemazvo. Vanhu ava vachashandawo nenhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru mukusimudzira magariro evanhu.
Vatiwo vanhu vavapa mabasa aya vane basawo rekuona kuti dare reparamende raumba mitemo inorerutsa mararamiro evanhu.
Nhengo dzedare raVaTsvangirai dzinoti VaTendai Biti vachange vachiona nezvemari, VaGorden Moyo vachange vachiona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaGift Chimanikire vachange vachiona nezvekudzivirirwa kwenyika, VaElias Mudzuri vachange vachiona nezvekutakurwa kwezvinhu uye Amai Ruth Labode vachange vachiona nezvehutano nekuchengetedzwa kwevana.
VaAbednico Bhebhe vachange vachiona nezvemighodhi, VaSam Sipepa Nkomo vachange vachiona nezvekurima nemvura, Muzvare Jessie Majome vachange vachiona nezvemutemo nenyaya dzeparamende, VaTapiwa Mashakada vachange vachiona nezvemaindasitiri, kozoti Amai Lillian Timveous ndivo vachange vachiona nezvemukati menyika.
Vamwe vadomwa ndi Amai Paurina Mpariwa, avo vachange vachiona nezvevashandi, VaNelson Chamisa vachange vachiona nezvekufambiswa kwemashoko, kozoti Amai Lucia Matibenga vachange vachiona nezvemadzimai nekusimudzirwa kwematunhu, Amai Concillia Chinanzvavana vachange vachiona nezvedzidzo yepasi, uye VaPeter Matarutse vachange vachiona nezvedzidzo yepamusoro.
VaTsvangirai vadomawo vanhu vashanu kuve nhengo yekomisheni iyo vati ichange ichitarisa zvirongwa zvebato ravo. Komisheni iyi ichange ichitungamirirwa naVaJameson Timba uye dzimwe nhengo dzayo ndi Amai Theresa Makone, VaElton Mangoma, VaTongai Matutu nemutauriri webato iri VaDouglas Mwonzora.
Zvichakadai, VaTsvangirai vazivisa kuti bato ravo riri kuongorora mamwe makanzura aro akavhotera Zanu PF musarudzo dzemameya dzakaitwa svondo rino.
Nhengo dzeMDC-T kumadhorobha akaita seVictoria Falls, Kwekwe neMutare dzinonzi dzakavhotera nhengo dzeZanu PF kuve mameya.
Panyaya dziri kubuda mumapenhau dzekuti vachisiya chigaro chekutungamira bato iri, VaTsvangirai vati havasi kuzoita izvi uye vacharamba varipo kusvika muna 2016 apo bato iri richaita kongiresi yekutsvaga vatungamiriri vatsva.
Chizvarwa cheZimbabwe Chiri Kunze, VaTakawira Kapikinyu, Voshuvira Kuti Zvinhu Zvinake kuMusha